Klopp oo ka hadlay loolanka adag ee Premier League iyo waxa ay ku riyoonayaan jamaahiirta Liverpool – Gool FM
Klopp oo ka hadlay loolanka adag ee Premier League iyo waxa ay ku riyoonayaan jamaahiirta Liverpool
(Liverpool) 04 Feb 2019. Macalinka kooxda Liverpool ee Jürgen Klopp ayaa qiray in uu awood u leeyahay in kooxdiisa uu ka caawiyo, loolanka adag ee ka jira horyaalka Premier League.
Manchester City ayaa ku soo yaeysay farqiga u dhaxeeya iyaga iyo Liverpool 2 dhibcood oo kaliya, kadib markii ay 3-1 ku garaaceen kooxda Arsenal.
Liverpool ayaa caawa oo isniin ah la ciyaari doonto kooxda West Ham United, iyadoo ku qasban in kulankan ay guul gaarto si farqiga dhibcaha ay kaga dhigto 5 dhibcood.
Hadaba tababare Jürgen Klopp ayaa kahor kulanka ay caawa la ciyaari doonaan West Ham United kaga warbixiyay saxaafada dhowr arimood ee quseeya kooxdiisa wuxuuna yiri:
“Haa waxaa jira cadaadis, sidoo kale waxaa jiray cadaadis badan sanadkii hore iyo cadaadis badan markii aan kaga aadnay Manchester City wareega quarter-finalka Champions League, balse ugu dambeyn waan ka gudubnay”.
Liverpool ayaa rajeyneysa inay soo gabagabeyso sugitaanka taageerayaasha oo mudo dhan 29 sano aanan ku guuleysan koobka horyaalka Premier League.
Sidaas darteed wali waxay ku dhegan yihiin hogaanka horyaalka Premier League xili ciyaareedkan, wuxuuna tababare Klopp ogsoon yahay in jamaahiirta ay ka walwalsan yihiin in markale ay iska lumiyaan riyadooda kaga aadan ku guuleysiga Premier League.
“Kooxdan ma aysan ku guuleysan horyaalka mudo laga joogo ilaa iyo 29 sano, sidee bay taageerayaashu u fadhiisan karaan oo ay ugu daawan karaan sida City oo kale”.
“Xaaladu way ka duwan tahay sidii hore, waxaan dhab ahaantii u baahanahay ku guuleysiga horyaalka iyo taageerayaasha, waxaan fahamsanahay in aan isku dayi doono wax kasta ee aan awoodno, laakiin ma jiraan wax damaanad ah, balse anigu ma ahi qof walwalsan”.
“Waxaan kaliya dooneynaa inaan garaacno Barcelona” - Santiago Solari
Muxuu Guardiola ka yiri Guushii wayneyd ay ka gaareen Arsenal iyo farqiga Liverpool???